Afobe mandravarava an’i Makedônia Avaratra, manimba ireo ala sisa tavela · Global Voices teny Malagasy
Ampiasaina ho fampielezankevitra pôlitika ny firehetan'ny ala
Nandika (fr) i Sk Abdul Gafur
Voadika ny 10 Septambra 2021 16:47 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Italiano, Español, Ελληνικά, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 5 Aogositra 2021)
Miaramilan'ny tafiky ny Repoblikan'i Makedônia Avaratra, tonga eny amin'ny afo any akaikin'i Kochani. Sary an'ny www.arm.mil.mk, nahazoana alàlana.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra ho amina tranonkala amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra.]
Lahatsoratra navoaka voalohany tamin'ny fiteny anglisy tao amin'ny Meta.mk. Dika nokiraina no averina avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana hifampizara votoaty nifanaovan'ny Global Voices sy ny Orina Metamorphosis.
Ho fiatrehana ireo fahamaizan'ny ala mandravarava ny avaratr'i Makedônia, netsehan'ny governemanta ny tafika mba hiady amin'ny afo sy hametraka fandraràna tanteraka ny fivezivezena any anaty faritry ny ala, tamin'ny fanambaràna fisiana hamehana manerana ny firenena. Toejavatra tsy misy hafa amin'izay nisy tany Tiorkia, Gresy ary ireo firenena hafa any atsimon'i Eorôpa izay niteraka firehetan'ny ala ny hafanana diso tafahoatra tamin'ny lohataona.
Nanomboka ny Alatsinainy 3 Aogositra, napetraky ny governemanta manerana ny firenena ny fandraràna tsy fahazoana mivezivezy any anaty faritry ny ala ao Makedônia Avaratra, mangataka ireo olompirenena tsy hiditra any anaty ala, sady ho fiarovana azy ireo no hisorohana ihany koa ny mety hisian'ny firehetana vaovao.
Voafehy ny alin'iny ilay afobe nandravarava ny manodidina ny tanànan'i Kochani [fr] tamin'ny harivan'ny 2 Aogositra, ary maty tanteraka nony ampitso.
Пожарот е изгасен, Кочани за малку ќе беше како знакот на сликата! Бидете претпазливи 🙏
Maty ny afo, ary saika niharan'ny nanjo ity takelaka be fampahafantarana hita eto amin'ny sary ity i Kochani! Samia mitandrina, ary isaorana ireo rehetra nitondra fanampiana sy ny fanohanana ! Aza milalao afo !
Raha nihananakaiky ny tanàna ity fahamaizana ity, nisahotaka ny tety anaty tambajotra sôsialy, marobe ireo olompirenena no nitaky tamin'ny governemanta mba hanomboka hampiasa ny angidimby sy fiaramanidina hiadiana amin'ireo afo. Nampiasain'ny sasany ho toy ny fampielezankevitra entina mandoko ny governemanta ho tsy mahavita azy ny fanambaràna iray avy amin'ny filoha nanao hoe tsy afaka ampiasaina andro alina ireo angidimby ho entina mamono ny afo. Takon'ireo “manampahazian'ny Facebook” ireo feo voalanjalanja nanazava hoe ny fenitry ny fiarovana dia mandrara ny fampiasàna fiaramanidina amin'ny andro alina ho entina manatontosa iraka tahaka izany, tao anaty fifanakalozana hiakiaka izay tsy nitsahatra raha tsy taorian'ny fandefasana ireo angidimby [mk] nony maraina.
Jane Stefanov, mpanamory ara-panatanjahantena sady mpikambana ao anatin'ny Aeroclub de Skopje, no niezaka nanazava tao anaty bitsika iray izay notanisaina betsaka:
Nisisika ianareo ny hisidinan'ireo fiaramanidina amin'ny andro alina… ahoana no tsy ahafahan-dry zareo manao izany… [tamin'ny filazàna] fa manana angidimby ry zareo ary misy fitaovana afaka ahitàna anaty haizina…sy ny sisa. Tokony ho fantatrareo fa ny famonoana afo dia tena loza mitatao ho an'ny ain'ireo mpanamory, eny fa na antondro be nanahary aza… [tsy raharahan-jaza] ny fakàna rano eny amin'ny farihy maizina iray sy ny fandatsahana azy iny amin'ny haavo ambany dia ambany eny amin'ireo toerana kisilasila – tsy misy ilay safidy mamerina mamahana raha ho an'io lalao an-dahatsary iray io!
Manerana ny firenena, misy toerana marobe mbola misy afo mirehitra any an'ala. Ny teboka iaingàny tena henjana dia ao Kochani, any atsinanana, sy ao amin'ny fari-piadidian'i Staro Nagorichane, ao avaratra. Any amin'ireo faritra roa ireo, ankoatra ireo ala amina hektara maro, dia fiara marobe, trano sy toeram-ponenana an'olontsotra maro no nirehitra ihany koa.
Tao Staro Nagorichane, angidimby iray aloha no nirotsaka an-tsehatra [mk] noho ny loza nitatao tamin'ireo toeram-ponenana akaikin'ny toerana arkeôlôjika ao Kokino [fr]. Nandritra izany fotoana izany, tao Kochani, marobe ireo andiany avy amin'ny mpamono afo sy ny tafika no nalefa hiady tamin'ny firehetan'ny ala, niaraka tamin'ny sampandraharaha mpamono afo tao Kochani sy ny mponina ao an-toerana. Miaramila hafa an'arivony sy angidimby iray no miandry ao amin'ireo tobin'ny tafika. Misy andian-tafika ihany koa mandray anjara amin'ny famonoana afo eo anelanelan'ny tanànan'i Delchevo sy Pehchevo.
Firehetana tao akaikin'i Pehchevo, Makedônia Avaratra. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe, avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Fitaleavana misahana ny Fiarovana sy Fanavotana.
Voarakitra fa misy firehetana ihany koa any Makedonski Brod [fr], ao afovoan'ny firenena, sy ao Valandovo, any atsimo, manakaiky ny sisintany iraisana amin'i Gresy.
Ny firehetana iray aelin'ny rivotra mehery any akakin'ny tanàna an-tsisintany ao Gevgelija, any atsimon'ny firenena, dia loza mitatao ihany koa ho an'ireo hôtely, casinos, tobin-tsolika sy toeram-pisavàna eny amin'ny sisintany ao Bogorodica-Evzonoi. Naato ny fivezivezena eny an-tsisintany nandritra izany fotoana izany, ary naverina afaka ora maro taty aoriana.
Tamin'ireo andro voalohany, vita ihany ny nifehy ireny firehetana ireny, na namaritra ny toerany tsy hisy fiantraikany amin'ny olombelona na handoro trano, noho ny ezak'ireo manampahefana avy amin'ny fanjakàna, ny olompirenena ary ireo orinasa teny an-toerana.
Kanefa, ny 5 Aogositra, ramatoa iray tsy hita nanjavonana tao amin'ny vohitra iray mitoka-monina ao Chelopek, any amin'ny faritra Staro Negorichane no nambara fa maty[ru], noho izy nijanona tao an-tranon-dry zareo izay levon'ny afo, raha ny fanamafisan'ny vadiny. Tamin'ny fotoana namaranana ity lahatsoratra ity, mbola tsy vita ny fanadihadian'ny pôlisy entina hanamarinana ilay fahafatesana.
Miaramilan'ny tafika ao Makedônia Avaratra, mamono afo anaty ala. Sary an'ny www.arm.mil.mk, nahazoana alàlana
Raha fintinina, ny 3 Aogositra, 14 ireo teboka mbola misy afo any amin'ny faritra rehetra ao Makedônia Avaratra no voarakitry ny ivontoerana fitantanana ny krizy. Ny ampitso, 11 ireo afo mbola tsy maty voarakitra, ka telo no vaovao fa valo no efa taloha. Na efa maty aza ny ankamaroan'izy ireny, ny 5 Aogositra, nilaza io andrim-panjakana io fa nisy 10 no mbola tsy maty.
Efa ho herinandro iray mahery, niaina hafanana midangana be ny tao Makedônia Avaratra, maripàna avo be nefa tsy misy orana. Efa maminavina fiavian-drivotra mahery avy any andrefana sahady ireo mpahay momba ny toetrandro, izay hahery kokoa ho an'ny faritra andrefan'ny firenena. Mbola hihatra hatramin'ny 6 Aogositra ny fanairana miloko volomboasary.
Ny 5 Aogositra, nambaran'ny [mk] governemanta ny fisiana hamehana mandritra ny 30 andro, nanetsehana ireo andrim-panjakana rehetra voakasika amin'ilay ady mba hiomanana sy hamonoana ny afo anaty ala.
Tamin'ny 2020, ny fikarohana nataon'ny ONG mpanaramaso “Center for Civil Communications” dia mamoaka [mk] fa ireo sampandraharaha miady amin'ny afo ao Makedônia Avaratra dia tena zara raha manana vola sy mpiasa, ary ny salan-taonan'ny fiara ampiasainy dia 28 taona, isan'izany ireo kamiao novokarina tamin'ny 1966.
Nangataka ny fanampian'ireo firenena mpiray vodirindrina aminy ny governemanta – namaly i [mk] Serbia ka nandefa angidimby efatra. Ny rafitra fiarovana sivily ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna ho fanampiana rehefa misy krizy [fr] dia nandefa ny mpamono afo avy any Slôvenia sy Bolgaria.
Izay mitambatra vato ! Noho ny rafitra @ECHO ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna, manampy an'i Makedônia Avaratra i Slôvenia amin'ny ady handresena ny afo anaty ala. Fiara 16 sy mpamono afo miisa 46 no efa an-dàlana ho any MK ary hijanona any mandritra ny herinandro sy hiady amin'ny afo eo anilan'ireo mpiray asa amin-dry zareo.
Tondraky ny lalaon'ny fifanomezan-tsiny ny tambajotra sôsialy
Manoloana ny zara fa fahavitàn'ny fanjakàna maitrika ny loza voajanahary, tsy mitsahatra ny mifampiampanga ho tomponandraikitra ireo antoko pôlitika mpanohitra sy ny governemanta, raha ireo mpampiasa Twitter kosa manakiana ny sasany amin'ireo mpanao pôlitika noho ny fampiasàn-dry zareo ireny toedraharaha ireny ho toy ny fotoana fakàna sary.
Eny anaty tambajotra sôsialy, marobe no miampanga ny “antony avy amin'olombelona” ho fototra niavian'ireo afo anaty ala. Fiampangàna milaza fa antony ara-barotra manondro ireo tantsaha izay, aorian'ny fijinjàna, dia mandoro ny vodivary /mololo eny an-tanimbolin-dry zareo [mk] fa tsy te-hiala vola hitatitra mankany amin'ny fanariam-pako – marobe ny tranga nitondra nankany amin'ny fanenjehana ara-pitsaràna taona vitsy tany aloha.
Anatin'ireo voampanga matetika, hita ihany koa ireo mpizahatany voalaza fa tsy mitandrina ary tsy miraharaha ny fepetra ka manao ny kitonotonon-dry zareo eny ankalamanjàna.
Ny fikapàna ala tsy ara-dalàna ihany koa dia olana iray goavana ao Makedônia Avaratra, ary misy ireo honohono milaza fa misy andiana jiolahy mpanao heloka bevava mandoro ny ala mba hanafenana ny làlana nolalovan-dry zareo, na mba hitrandrahana ireo tsy fahombiazana anatin'ny lalàna manome alàlana ny fikapàna ala any anatin'ireo ala may. Antony iray hafa lazaina fa resaka tombontsoa ny fiotazana ireo holatra izay matetika mitsiry any anaty lavenon'ireo ala may.
Fiarahamonina faran'izay mihenjan-droa ny an-dry zareo Makedôniàna, eo ambonin'ny fitsipiky ny antoko ary dia miroborobo ny teorian'ny fikasan-dratsy fisomparana an-kitsirano ataon'ireo mpankafy milalao afo atosiky ny firehana pôlitikany, indrindra fa ireo honohono mifandraika amin'ny lazaina fa fanimbàna ny Andron'ny Repoblika, andro iray tsy iasàna manerana ny firenena rehefa 2 Aogositra. Tsy nanamafy an'io honohono io ny pôlisy na ny asan'ny fitsaràna.
Eo ny olan'ny toetrandro… ny fiakaran'ny rano tampoka tamin'ny 2016 tao Singelikj, Stajkovci, Smilkovci ary Arachinovo sy ireo firehetan'ny ala tao Kochani, Staro Nagorichane ary tany amin'ireo toerana hafa. Tsy misy fotoana ho an'ny andraso andraso. Tsy maintsy raisina ireo fepetra hentitra hiatrehana ny fiovàn'ny toetrandro. Tsy haintsika izay mety hanjo antsika afaka 5 na 10 taona.